सोमबारको राशीफल : राशीअनुसार तपाईको धन, धर्म र भाग्यमा कस्तो योग छ ? हेर्नुस्:: Artha Dabali
सोमबारको राशीफल : राशीअनुसार तपाईको धन, धर्म र भाग्यमा कस्तो योग छ ? हेर्नुस्
वि.सं. २०७६ भाद्र २३ गते सोमबार तदनुसार ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर ०९ तारिख । भाद्रपद शुक्ल एकादशी, पूर्वाषाढा नक्षत्र, धनु राशिको चन्द्रमा, सौभाग्य योग, वणिज र विष्टि (भद्रा) करण
आजको चाडपर्व र उत्सव: हरिपरिवर्तिनी एकादशी व्रत
मेष राशी हुनेहरुको आज कडा परिश्रम व्यर्थै खेर जान सक्छ । हाकिम वा ठूला मानिससँग चित्त नबुझ्न सक्छ । व्यापार व्यवसाय वा रोजगारीको क्षेत्रमा कडा मेहनत गरे मात्र लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
वृष राशीहुनेहरुको लागि आज यस मनोरञ्जनमा दिन बित्नेछ । काम गर्न जाँगर चल्नेछ । उत्साहवद्र्धक समय छ । आम्दानी बढ्न सक्छ । दिन ढल्दै जाँदा जिम्मेवारी बोध हुँदै जान्छ । व्यवसायका गिितबधिका संलग्न हुन मन लाग्नेछ । आम्दानीको दृष्टिले खासै नराम्रो छैन । विलासिताको सामानमा खर्च बढ्नेछ ।
मिथुन राशी हुनेहरुको आज । लामो समयदेखि रोकिएका काम बन्ने योग छ । न्याय सम्पादनका काममा लाभ प्राप्त हुनेछ । आजको विनियोजना र लगानीले फाइदा दिलाउनेछ । घरायासी सुख सुविधा र महंगो सामानको किनमेल हुनेछ । यात्रा लाभप्रद हुनेछ । आर्थिक समस्या समाधान गर्ने उपाय पत्ता लाग्नेछ ।
यस राशी हुनेहरुको आज आत्मबल बढ्नेछ । शैक्षिक प्रगतिको समय छ । व्यापार व्यवसायबाट लाभ मिल्ने दखिन्छ । पारिवारिक सहयोग बढ्ने छ । मान मर्यादा र सामाजिक प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ ।
सिंह राशी हुनेहरुको आज विशिष्ट व्यक्तिसँगको छलफलबाट लाभ मिल्नेछ । आम्दानीको नयाँ स्रोत देखा पर्नेछ । परेदशमा बसी रोजागारी र व्यवसाय गर्नेहरुले खानपिन र मनोरञ्जनमा खर्च गर्ने छ ।
कन्या राशी हुनेहरुका लागि आज पराक्रम र प्रसिद्धी बढाउने समय छ । सानातिना काममा अल्झिनु उपयुक्त छैन । दिर्घकालिन फाइदाका लागि गरिएको काम फाइदाजनक हुनेछ । व्यापार व्यवसायले सोचेको फाइदा दिलाउनेछ । आम्दानी बढ्नेछ ।
यस राशी हुनेहरुका लागि आज बोलीको प्रभाव बढ्नेछ । जाँगर बढ्नेछ । आर्थिक लगानी बढाउन उपयुक्त समय छ । नयाँ ठाउँमा निवेश र लगानीको वातावरण बन्नेछ । कारोबारमा सुधार आउनेछ । विगतको श्रमबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ । रोकिएका काम बन्नेछ । राम्रो फाइदाको योग छ ।
वृश्चिक राशी हुनेहरुका लागि नयाँ कामबा लागि अवसर आउनेछ । दैनिक कामकाज सजिलै सम्पन्न हुनेछ । व्यापार व्यवसाय र रोजागारीको क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ । निर्माण वा व्यवहारिक काममा मन जानेछ । आत्मविश्वास बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट लाभ मिल्नेछ । मन पर्ने वस्तु उपहार पाउने योग छ ।
धनु राशी हुनेहरुका लागि आज यात्राको योग छ तर होसियार हुनपर्छ । गोप्य योजना कार्यन्वयन गर्न अनुकुल समय छ । संमयम रहनुहोला । व्यापार व्यवसाय सन्तोषजनक रहेको छ । नयाँ कामको वातावरण बन्नेछ । अर्थलाभको अवसर आउनेछ । घर खर्चमा वृद्धि हुनेछ ।
मकर राशी हुनेहरुका लागि आज मेहनत गर्दा जुनसुकै कामबाट पनि फाइदा पुग्नेछ । प्रज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिने समय छ । आत्मबल र निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ । नोकरी गर्नेले मान सम्मान पाउनेछ । राज्यपक्षबाट हुने काममा सफलता मिल्नेछ ।
यस राशी हुनेहरुले आज काम गर्न जाँगर बढ्नेछ । काममा सोचेजस्तो सफलता मिल्नेछ । नयाँ रोजगारी मिल्ने सम्भावना छ । धैर्य धारण गरी परिश्रम गर्ने दिन छ । व्यापार व्यवसायमा सोचेजति लाभ पाइनेछ ।
यस राशीका लागि आज परोपकारी काममा खट्नुपर्ने समय छ । बौद्धिक क्षेत्रमा गरेका प्रयास सफल हुनेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाउने छ । सानो प्रयासले रोकिएका काम बन्नेछ । आम्दानीमा कमी आउनेछैन । परमार्थिक काममा खट्नुपर्ने समय छ । सानो प्रयासले भाग्यबल वृद्धि गर्ने समय छ । ।